amazon echo vs. google imba: ndeupi ari nani?
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Echo vs Google Imba: ndeupi mutauri akangwara anokwana iwe zvakanakisisa?
Masipika masipika chikamu chitsva chezvinhu zvigadzirwa zvakagamuchirwa zvishoma nezvishoma. Ivo vakave chinhu mukupera kwa2014 apo Amazon yakavhura yayo Echo - yakareba cylindric speaker, ine yakavakirwa-mukati Alexa smart mubatsiri, iyo iwe yaunogona kudzora uchishandisa izwi rako.
Makore mashoma gare gare uye isu tinogona kuona kuti smart smart speaker musika yakagadzira zvishoma. Vagadziri vakuru, senge Apple uye Google , vatoburitsa yavo yega AI-jekiseni zvigadzirwa, vachiita yavo yekutanga kuyedza kukunda mumba mako. Uye sezvo paine zvinopfuura zvingasarudzwa zviripo, zvinogona kuratidza kuve rakaoma basa kutaura kuti ndeipi iri yakanakisa, kunyanya kana iwe & apos; tichironga kutenga imwe. Ndicho chikonzero nei isu & apos; isu tasarudza kuita enzaniso pakati pevaviri veakanakisa mutauri pamusika izvozvi - Amazon Echo neGoogle Imba. Kunyangwe iwe & apos; uri munzira yako kutenga yako yekutanga smart mutauri, kana iwe & apos; ingori curious tech-nyota geek, usape & apos; usanyara uye uverenge kuAmazon Echo maringe neGoogle Kumba chinyorwa.
Amazon EchoWechipiri-gen Amazon Echo ndiye mutsivi wemusika-kutsanangura chigadzirwa chaive chekutanga-gen Echo. Kutakura mutoro wekorona ibasa rakaoma, asi wechipiri-gen Amazon Echo inoita basa nemazvo. Dhizaini yakaramba yakaenzana zvakafanana neiyo yekutanga Echo, zvichireva kuti maapos achiri akareba uye ari cylindrical, mutsauko chete kuve kuwedzerwa kwesarudzo nyowani dzekuvaka, senge huni nesimbi. Uye nekuti iyo Amazon Echo inotanga kuitirwa mukurukuri, inofanirwa kuve yakanaka mune odhiyo department. Uye ndizvo. Kuti basa riitwe, mutauri ane 2.5 'woofer uye 0.6' tweeter mukati, ese ari maviri anofambiswa naDolby, kuendesa ruzivo rukuru rwekuteerera, rwakapfuma mumatoni. Iyo 'huropi' yeAmazon Echo ndeye Alexa - Amazon & apos; ivo pachavo vane hungwaru mubatsiri akagadzirwa kuti akwane iyo ecosystem yezvigadzirwa. Alexa inogona kuita chero zvese zvaunokumbira iwe, asi isu & apos; tichazotaura zvakawanda nezvazvo sekondi.
Imba yeGoogleYakaburitswa makore maviri mushure meEcho, Google Imba yaifanirwa kubudirira kukwikwidza mumwe wayo weAmazon mune zvese zvinhu zvingafungidzirwe. Mitambo yeGoogle Imba inoonekera-inotaridzika dhizaini dhizaini, iyo inogona kukodzera mushe chero yemukati nekuda kwesarudzo dzekugadzirisa iwe dzauinadzo, asi isu & maapos; tichasvika kune iyo sekondi. Iwe unogona zvakare kuchinja pakati pemarudzi akasiyana, uchiitira gadget yakazara-inogadziriswa. Uye nekuti iyo Imba yeGoogle ndiyo yekutanga uye inonyanya kutaura, inoda kurira zvakanaka. Uye zvinoita - kubvisa jira-rakaputirwa grill rinofumura mutauri mukuru, padivi pemaviri madiki. Ruzha rwezvinhu zvitatu zvinoburitsa hazvina kushata - nepo iwe ungasanzwe iwo akajeka matoni, kurira kwacho kune ruzha uye kune mamwe mabass kwariri, iyo isina Echo.
Amazon EchoIzvo hazvina & apos; hazvina basa kuti mutauri akangwara anonzwika zvakanaka here kana kwete kana isina kuenderana nezvimwe zvigadzirwa zvehungwaru (kana iwe & apos; re Apple). Usanetseka kwete, sezvo iyo Amazon Echo inogona kushanda neinenge yega gadget iri kunze uko, ichikubvumidza iwe kuti uitonge nekungoshandisa izwi rako. Isu & maapos tiri kutaura nezve ese marudzi emakachengeteka macamera, smart kukiya, mwenje, madhoo, zvishandiso, unozvipa zita - iyo Echo inoshanda chaizvo neiyo. Nekudaro, zvimwe zvishandiso zvinogona kuda kuti iwe utorere hunyanzvi hweAki ((kunyanya izwi-rinobva paapp) kubva kuAki Skill Chitoro, saka chengeta izvo mupfungwa.Imba yeGoogleIyi ndiyo imwe yenzvimbo Google Imba inowira kumashure kweAmazon Echo. Usatikanganisa - Google Imba zvakare inogona kusangana uye nekukupa iwe kutonga pamusoro pemamwe emagetsi anozivikanwa kwazvo kunze uko, kusanganisiraPhilips Hue lightbulbs, ese marudzi eNest kamera uye thermostats, uye zvakawanda, zvimwe zvakawanda. Nekudaro, Google Imba ichiri kushomeka mukuenderana kana ichienzaniswa neEcho, mienzaniso isiri rutsigiro rweLightify smart bulbs, Insteon smart zvigadzirwa zvemumba, nezvimwe, zvinoisa nhanho kumashure.
Amazon EchoIko & apos; hapana mubvunzo moyo nemweya weAmazon Echo ndiyo yakavakirwa-mukati smart smart, inonzi Alexa. Yakasanganiswa neyakagara-pa mic, iyo yekuchenjera yekuchengetera inokutendera iwe kudzora mutauri nekushandisa hotword 'Alexa', inoteverwa nechero chako chikumbiro. Semuyenzaniso, 'Alexa, chii & apos; s mamiriro ekunze neMuvhuro?yaizoita kuti mubatsiri aitsvage uye ataure zvinonzwika. Iwe unogona zvakare kushandisa Alexa kufona, kutumira mameseji, kuwedzera zviitiko kukarenda yako, kumisikidza yako purogiramu uye zvakawanda, zvimwe zvakawanda. Kudzora smart gadget pamba zvakare sarudzo, kana izvo zvikabatanidzwa neEcho. Kuridza mimhanzi zvakareruka zvakare - unongobvunza Alexa rwiyo rwaunosarudza, uye iye & apos; vachariridza. Ramba uchifunga nezve default default mimhanzi seAmazon Prime Music, uye kana iwe uchida kuti chimwe chinhu chiratidzwe kubva kuSpotify semuenzaniso, unofanirwa kuchidudzira.
'Maitiro' ndeimwe nzvimbo yekutengesa yechipiri-gen Amazon Echo. Inowanikwa zvese pairi kuenda uye uchiri kumba, 'Maitiro' anokutendera kuti uchengetedze seti yezviitiko pamwechete, izvo zvinokonzereswa nekutaura mumwe mutongo. Kukupa muenzaniso, uchiti 'Alexa, mangwanani akanaka!'unogona kubatidza mwenje kana kusimudza machira (kana iwe & maapos une machira akachenjera), simudza tembiricha ye thermostat, wobatidza TV. Zvese zvakataurwa, 'Maitiro' chinhu chitsva uye ichine zvimwe zvakakanganisika, kusakwanisa kusarudza chirevo chekutanga (iyo inotanga maitiro) iwe, asi Amazon inoramba ichivandudza chimiro nekusunungura zvishoma nezvishoma.
Chimwe chinhu chinobatsira cheEcho izita rayo rehunyanzvi hweAki. Iwo anogona kurodha pasi-based apps, izvo zvinogonesa ese marudzi ezviitiko. Kuti uite muenzaniso, kurodha pasi 'Chikomo & apos; s Pet Nutrition' app, inoita kuti iwe ubvunze Alexa nezve matipi ehutano kune imbwa / katsi yako. Rondedzero yehunyanzvi hweAki inosanganisirawo izwi-rakavakirwa mitambo, senge inozivikanwa 'Guess Zita Rangu', kana 'Simon Tap', kwaunodzokorora pateni nekutepa Echo & apos; s magetsi.
Imba yeGoogle Imba yeGoogle ine mubatsiri akangwara wayo, iyo inobatsira kuti igutse zvaunoda. Iyo & apos; inonzi Google Mubatsiri uye iyo & maapuro zvakare inowanikwa pane yako smartphone. Izvo zvinoitikawo kuva mubatsiri ane ruzivo uye achapindura chero mubvunzo waunokanda pauri. MaYankees akakunda here nezuro husiku? Ndeapi & apos; mamiriro ekunze mu Honolulu? American Air inoenda riini kuParis? Iwe unogona kubvunza iyo mibvunzo uye yakawanda yakawanda nekutanga kumutsa mutauri neiyo 'Hei / OK, Google' hotword. Chii chinowedzera & apos; kana iwe ukabvunza mumwe mubvunzo mukati mechirevo, Google ichapindura, ichiita kuti inzwe senge kurukurirano chaiyo. Kutaura nezvekurukurirano, Imba yeGoogle inonzwa chero iwe & apos; taura kunyangwe iwe & apos; re uriri kure nekuda kwekuona kwayo kwakaringana izwi.
Kana zvasvika pakutamba mimhanzi, Google Imba iri nyore kushandisa senzvimbo yayo yeAmazon - iwe unodoma rwiyo nemunyanzvi uye iwe & apos; uchanakidzwa nazvo mumasekondi mashoma. Google Play Mimhanzi ndiyo yekutenderera mimhanzi yekushambadzira sevhisi, asi iwe unogona zvakare kusarudza pakati peSpotify, Pandora, YouTube Red, Apple Music, zvichingodaro. MaAmazon services haatsigirwi, saka hapana Inonzwika kana Amazon Prime Music. Kutenderera mimhanzi kubva kufoni yako zvakare sarudzo yeese Echo neGoogle Imba.
Amazon EchoYechipiri-gen Echo inotevera dhizaini dhizaini yakatarwa neyakatangira. Iyo ichiri humburumbira, asi iri mupfupi uye yakafara panguva ino, ichisvika 5.9 'pakukwirira uye 3.5' muhupamhi. Mutauri grills ari pazasi-hafu yemutauri, uye kana achionekwa kana kwete zvinoenderana neEcho Kavha yaunosarudza. Kutaura nezvezvifukidzo, unogona kusarudza pakati pematanhatu akasiyana emahombekombe eako Amazon Echo. Iwo anoita sematehwe, aunogona kushandura pese paunoda uye ari anotevera:
Mucheka Unovhara: Marasha, Heather Grey, Sandstone
Zvinhu Zvekuvhara: Sirivha, Oak, Walnut
Izvi ndizvo zvinoita Echo yako
Uye nekuti iwe unokwanisa kudzora Amazon Echo panyama, pane mabhatani mana pamusoro payo - vhoriyamu kumusoro / pasi mabhatani, bhatani rekunyaradza maikorofoni (yezviitiko izvi kana iwe usinga da & apos; usade Alexa kuteerera), uye chiito bhatani, iyo inogona kuita zvinhu zvakasiyana, zvinoenderana nemamiriro ezvinhu.
Imba yeGoogleWati wamboona otomatiki mweya freshener? Ndo zvinoita seGoogle Imba, uye inogona kukanganisa zvisiri nyore kune imwe fenicha kana iwe uine maapositi usiri-mageek vashanyi. Imba yeGoogle yakaumbwa sekoni, inosvika 5.6 'kureba uye 3.8' upamhi, iko kune ayo anobata-anokwanisa kudzora aripo, padivi pemamwe mwenje weLEM, iyo inoita pese paunoshandisa. Kumberi kune bhatani rekuvhara mic.
Imba yeGoogle inogona kugadzirwa, zvakare. Unogona kushandura hafu yezasi yechigadzirwa (Google inodaidza iyo 'base'), iyo inoviga vatauri vayo, kuita imwe yesarudzo ina dzakasiyana: purasitiki dema, jira reorenji, purasitiki yepepuru, kana jira grey (rinouya nekumira).
Amazon EchoIyo Echo inowanzo tengesa madhora 99,99 kuAmazon.com asi iyo kambani dzimwe nguva inomhanyisa zvidzori pairi (senguva yekunyora, Amazon Echo inogona kutengwa pane 15% dhisikaundi ye $ 85). Iwe unogona zvakare bundle Amazon Echo nechimwe chigadzirwa kuti uwane yakanyanya dhisikaundi, iri mutengo, zvakare. Unogona kutenga yechipiri-gen Amazon Echo pano .
Ose maviri maGoogle neAmazon anomhanyisa mhanyisa pane avo vakachenjera maspika.
Imba yeGoogleIyo Google-yakamisikidzwa smart mutauri inodhura zvakanyanya kupfuura iyo Echo, yakatengwa pamadhora 129, asi mikana iwe ungangosangana nemutengo, sezvo Google inomhanya navo kazhinji kazhinji. Iko kune bundle zvinopihwa futi, semuenzaniso, kana iwe ukatenga Google Imba uye Google Imba Mini, iwe & apos; uchachengetedza $ 25. Unogona kutenga Google Home smart mutauri pano .
Uye anokunda ndiye ... iyo Amazon Echo!
Iine huwandu hwayo hwehunyanzvi hweAkiel, iyo Amazon Echo inogona kuita zvakaringana chero chinhu chaunokumbira iwe. Fonera hama? Tarisa. Nyorera mumwe munhu meseji? Tarisa. Maitiro anoshandura zvachose ruzivo rwako? Tarisa. Amazon Echo inogona zvakare kukodzera mukati mechero zvemukati sezvo iine akasiyana mavara makomba ayo iwe aunogona kuchinjanisa pakati.
Ehe, Alexa haina kungwara seGoogle Mubatsiri uye haugone & apos; kuita mamiriro e Q & A chikamu nayo, asi iyo Echo inopa yakanyanya kukosha kukosha kuti ifuratirwe. Icho chokwadi iwe chaunogona kutenga chaicho kuburikidza neAmazon uchishandisa chete izwi rako chikonzero chakaringana kutenga iyo Echo, asi iyo & apos; haina chete iyo iyo yainofanira kupa. Iyo Alexa Skills Chitoro inzira inoshamisa yekuvandudza yako smart mutauri mashandiro, uye chokwadi iwe chaunogona kuita multitask uchishandisa chete izwi rako kuburikidza neRotines ficha zvirokwazvo mutambo wekuchinja. Kwete, isu & apos; hatisi kuti Google Imba yakaipa - zvinongoreva kuti iyo Amazon Echo iri nani. Kana iwe & apos; uchitsvaga yakakwana-yakakwana, isingadhuri mutauri akangwara, iyo inoitikawo kuva yako yekutanga, usatarise kupfuura iyo Amazon Echo.
yakanakisa iphone 12 pro max kesi
samsung vs google zvinyorwa kune kutaura
Samsung Galaxy S6 mitengo kutanga pa € ​​699 muEurope, iyo S6 kumucheto 128 GB inogona kuita € 1,049
Ndeapi ma mobile carriers anovhara 3G network muUS?
Motorola inoratidza kuti ndevapi vatakuri veU.S., vatengesi vachatengesa iyo Moto G6, G6 Play, E5 Play uye E5 Plus
Maitiro ekuratidza bhatiri muzana paGPS S10, S10 Plus uye S10e